← राउटेले अस्वीकार गरे कोमल वलीको प्रस्ताव !	साप्ताहिक मोडल →	यिनै हुन् संसार हल्लाउने विकिलिक्सका सञ्चालक	05
असान्ज आफैं पनि साइटजस्तै लगभग असाधारण छन् । अस्ट्रेलियामा सन् १९७१ मा जन्मेका उनी स्कुल कहिल्यै गएनन् । अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्करका अनुसार उनकी आमा छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँदा उनीहरुमा अधिकारप्रति अस्वस्थ सम्मान सिर्जना होला भन्ने डर मान्थिन् । असान्जका आमा र बाबु डुलिरहने भएकाले निश्चित स्कुलमा शिक्षा सम्भव भएन । घरमै, पत्राचारमार्फत र पछि विश्वविद्यालयका शिक्षकसँग अनौपचारिक रुपमा पढेका र पढ्न भनेपछि हुरुक्कै हुने असान्जले सानैदेखि विज्ञान र कम्प्युटरमा रुचि देखाए । १६ वर्षको हुदाँ उनले सक्षम ह्याकरका रुपमा स्थापित गर्दै आफूलाई ‘मेन्ड्याक्स’ नाम दिए । लगत्तै असान्जले दुई अरु ह्याकरसँग ‘इन्टरनेसनल सवभर्सिभ’ समूहखडा गरे । कम्प्युटर प्रोग्राममा असाधारण क्षमताका असान्जलाई क्यानडेडी फोन कम्पनी नोर्टेलको अस्ट्रेलियास्थित कार्यालयको कम्प्युटर सञ्जालमा अनधिकृत छिरेको आरोपमा त्यतिबेलै मुद्दा चलाइएको थियो । उनले ह्याकिङ थाल्दा इन्टरनेट या अन्य कम्प्युटर सञ्जाल सुरुवाती अवस्थामाथियो । अस्ट्रेलियामा प्रहरी पनि त्यस्तो अपराधबारे सिक्दै थिए ।निश्चित काम नगरेका र १८ वर्षमै बिहे गरे पनि केही वर्षमै छुट्टएिका असान्जले पूर्वपत्नीबाट छोरामाथिको आधिकारकालागि लामो तर सफल कानुनी लडाइँ लड्नुपर्‍यो ।
← राउटेले अस्वीकार गरे कोमल वलीको प्रस्ताव !	साप्ताहिक मोडल →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...